तीतो क्षणमा अमिलो थप्ने एउटा तस्बिर
डिबी खड्का शनिबार, माघ १०, २०७७, १६:२५
मलेसियाका ल्याइएको शव बोकेर गन्तव्यतिर गइरहेको पिकअप भ्यान। तस्बिर : निमेषजंग राई
सबैले भन्छन्- तस्बिर आफैं बोल्छ। तस्बिरले त कटाक्ष पनि गर्ने रहेछ! त्यो पनि यस्तो कटु यथार्थमाथि, जसको तीतो सहन यसै पनि सकस परिरहेको हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा कैद भएको एक तस्बिरले तीतो मात्रै होइन, अमिलो पनि थपेको छ। तीतो नै पचाउन मुस्किल परिरहेका बेला तस्बिरले थपेको अमिलोले झन् ठूलो कटाक्ष गरिरहेको छ।
जिन्दगी सुन्दर बनाउने सपना बोकेर पराइ भूमि पुगेका १८ जीवन शनिबार शव बनेर नेपाल आइपुगे। शव पनि सजिलै ल्याउन नसकिने समयमा लामो प्रतीक्षापछि जसोतसो ल्याइए।
शव बुझ्दै गर्दा आफन्तका आँशु खसेको हृदयविदारक दृष्य त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका धेरैका लेन्समा परे। त्यहीबीच सहकर्मी निमेषजंग राईको क्यामेराको लेन्समा एउटा यस्तो दृष्य पर्‍यो, जसले एकपल्ट रोकिएर गम्न बाध्य पार्छ।
झट्ट हेर्दा तस्बिर सामान्य छ। एउटा पिकअप भ्यानले एउटा शव र सँगै सुटकेस बोकिरहेको छ। अरु गाडीमा जस्तै त्यो गाडीमा पनि एउटा गाडी साहित्य छ। लेखिएको छः
हाँसीखुशी जिन्दगी चल्छ,
मेहनत गरे नेपालमै सुन फल्छ
त्यो साहित्य अरु समय, ठाउँ र अवस्थामा देख्दा सामान्य नै हो। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्तका आँशु छचल्किरहेको अवस्थाको दृश्य भने शक्तिशाली बनेको छ। तस्बिर हेर्दा लाग्छ, शक्तिशाली सन्देश होइन, संयोग हुने रहेछ। संयोग यो अर्थमा कि, शव बोक्नका लागि तोकिएको गाडी (शवबाहन) होइन यो, संयोगले शव बोक्न पुगेको मात्र।
नेपालमै मेहनत गर्न प्रेरित गर्ने यो लाइन विदेशबाट फर्किएको कुनै जिउँदो मान्छेले देखेको भए कति सान्दर्भिक हुन्थ्यो! जिउँदो मान्छेले यो सन्देशलाई प्रेरणा ठान्दो हो। तर, यो लाइन लेखिएको ठीकमाथि विदेशमै ज्यान गुमाएको एउटा नेपालीको शव छ। यो खराब परिस्थितिमा सही यत्ति मात्रै भएको छ, शवले सन्देश पढ्दैन! पढ्थ्यो भने ‘कटाक्ष’ गरेको महसुस गर्ने थियो! कस्तो अफसोच, शवले कटाक्ष सहनुपर्ने!
तस्बिरले त्यस्तो बेला पाठ पढाइरहेको छ, जतिबेला एउटा पढ्नुपर्ने मान्छे त्यसैका माथि शव बनेर लडिरहेको छ। पढ्नुपर्ने अरु धेरै मान्छे आपसमा लडिरहेका छन्।
यो सन्देश पढ्नैपर्ने मान्छे राजनीतिज्ञ हुन्। जसले नेपालमै मेहनत गरेर सुन फलाउने वातावरण कहिल्यै बनाउन सकेनन्। त्यसैको परिणाम आज एकैपल्ट १८ जीवन शव बनेर नेपाल आए। अझै धेरै जीवन शवका रुपमा विदेशी भूमिमा थन्किएका छन्।
नेपालमै सुन फलाउनका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य शर्त हो। लय समात्नै लागेको राजनीतिले यही बेला फेरि बाटो बिराएको छ। मेहनत गरेर देशमै सुन फलाउन लागिपरेकाहरूलाई समेत भड्काउन थालेको छ। ‘यो देश बन्दैन’, ‘यहाँ केही पनि हुँदैन’ जस्ता विरक्ति बोक्ने वाक्य बाक्लै सुनिन थालेका छन्।
उनीहरू मेहनत गर्नकै लागि पराइ भूमि पुगेका हुन्। ज्यानकै बाजी लगाएर जीवन धान्नुपर्ने नेपाली जीवनका बाध्यताको एउटा परिणतिको तस्बिर हो यो।
शवलाई यो परिस्थितिले भावुक बनाउन सक्छ, यो कटाक्षले घोच्न सक्छ तर राजनीतिज्ञलाई? नेपालका राजनीतिज्ञसँग त शवले पनि सावधान रहनुपर्ने बेला भएको छ, किनभने उनीहरू यहाँ पनि ‘एजेन्डा’ खोजिरहेका हुन सक्छन्!
बाकसमा आफन्त आउँदा...[फोटो फिचर]शनिबार, माघ १०, २०७७
यातना र दमनले कहाँ रोकिन्छन् र प्रश्न आफूलाई गलत लागेको विषयमा आवाज उठाउँदा उनी गम्भीर घाइते भएको यो दोस्रो पटक हो। टाउकोमा लागेको चोटले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमै समस्... शनिबार, फागुन १५, २०७७
अन्तर्राष्ट्रिय गणित सम्मेलन चैतमा शनिबार, फागुन १५, २०७७